Soo dejisan OpenVPN 2.3.12 – Windows – Vessoft
OpenVPN – software awood leh in ay la shaqeeyaan shabakooyinka gaarka. OpenVPN kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan iyo astaysto shabakada dalwaddii ku salaysan dhibcood la xidhiidha ee Wi-Fi ama ADSL-Moodeemka. Software ayaa awood u tahay in la abuuro kanaalada Windows XP in ay ku xidhmaan server ama ka mid helaan dhibic si kale oo ay u gudbinta si router ama modem. OpenVPN ku jira qalab badan oo ay ku reserved in shabakadaha sida SSL ama VPN ay helaan automatic. Sidoo kale software u isticmaalo technology gaar ah si ay u bixiyaan ilaalinta ugu badan ee webigu ku soo channel iyo macluumaadka ugu muhiimsan.
Waxay abuurtaa channels lo kala duwan
Habka Automatic kasbashada
Isticmaalka maktabadda OpenSSL
Wanaajinaysaa wax soo saarka ee programka sirta
العربية, English, Français, Español... TunnelBear 2.3.25
English, Français, Deutsch, Italiano... Freegate 7.59